लामो समयसम्म शा’री’रिक सम्पर्क नगर्दा शरीरमा आउँछ यस्तो प’रिवर्तनहरु ! – Online Khabar 24
लामो समयसम्म शा’री’रिक सम्पर्क नगर्दा शरीरमा आउँछ यस्तो प’रिवर्तनहरु !
October 12, 2021 by admin admin
एजेन्सी मानिसको जीवनमा विभिन्न खालका स’मस्याहरु आउछन् ।
कतिपय शा’री’रिक हुन्छ भने कति मा’नसिक पनि हुन्छ । विशे षगरी विवाहित व्यक्तिहरुमा पनि कुनै यस्तो स’मस्या हुन्छ । जुन कुनै समयमा आफ्नो पार्टनरसँग खु’लेर शा’री’रि’क स’म्पर्क गर्न स’क्दैनौं ।
यो विषय वि’वाहित र अ’विवाहित सबैका लागि लागू हुन्छ । विवाहित व्यक्ति पनि सधैं शा’रि’री’क सम्पर्क गर्न स’क्षम हुनसक्छन् भन्ने हुँदैन । लामो समयसम्म शा’री’रिक सम्पर्क सम्पर्क नराख्दा श’री’रमा यस्तो खालको परिवर्तन हुन्छ ।
सम्बन्धमा तितोपना कामेच्छामा परिवर्तन थकान महसूस निद्रा नलाग्ने समस्या रोगप्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमि गो’प्य अ’ङ्गमा सं’क्र’मण
शरीरका सम्पूर्ण अंगलाई उपयोगी फल बेल हुनत अहिले बेलको सिजन होइन । यो प्राय चैत/बैशाखमा पाउने गरिन्छ । तर कतिपय स्थानमा अन्य समयमा पनि बेमौसमी वा स्टोर गरेको बेल पाउने गरीन्छ ।
बेल यस्तो फल हो, जसले शरीरका सम्पूर्ण अंगलाई फाइदा पुर्याउँछ । अझ चैत बैशाखको गर्मीमा त यसको फाइदा बढि प्राप्त गर्न सकि न्छ । बेलको सेवनले पेटसम्बन्धी रोग भएका मानिसलाई अत्यधिक लाभ पुर्याउँछ । बेलमा कार्बोहाइडेड, चिल्लो पदार्थ, प्रोटिन, भिटा मिन, क्याल्सियम, पोटासियम, फाइबर र क्यालोरी पाइन्छ । यस अलावा बेलमा एन्टिफंगल, एन्टिप्यारासाइटिक गुण पाइन्छ ।
बेललाई बिहान खाली पेटमा पानीमा मिसाएर खान सकिन्छ । यस बाहेक अन्य समयमा समेत यसको सेवन ला’भदायी हुन्छ । फाइदा शरीरको विकार रगतलाई शु’द्धीकरण गर्न बेलको सेवन उत्तम मानि न्छ । कानको स’मस्या भएकाहरुका लागि बेल गुणकारी फल हो ।
पेटसम्बन्धी रोग, अल्सरको समस्या हुनेका लागि बेल अमृत समान मानिन्छ ।
युरिक एसिडमा पनि बेलको सेवनले फा’इदा पुर्याउँछ । सुकाएको बेलको बोक्रा कुटेर बिहान–बेलुका काँडा बनाई खाएमा पेटको रोग ठीक हुन्छ । अमिलो पानी आउने, चिया खानै नहुनेले बेलको काँडा खाए पित्तको रोग ठिक हुन्छ । पायल्स रोगका लागि पनि बेल एक उत्तम औषधि मानिन्छ। यो खबर साभार गरियको हो । यस्तै यो पनि पुरा खबर पहिले यो भिडियो ,
सलाद होस् वा तरकारी र अचारमै किन नहोस् प्याज धेरै खाइने चिज हो । स्वादका लागि खाइने प्याजको गुण केवल खानालाई स्वादिलो तथा बासनादार बनाउनेमा मात्र सिमित छैन ।प्याजमा विभिन्न औषधिय गुण पनि पाइन्छन् र यसको सेवन स्वास्थ्यका लागि हितकर हुन्छ । विज्ञहरुका अनुसार कतिपय स्वास्थ्य समस्याको रोकथाम र उपचारमा प्याज लाभदायक हुन्छ ।
प्याज हामीले तरकारी मिठो बनाउन प्रयोग गर्छौँ । यो स्वास्थ्यको हिसाबले पनि निकै लाभदायक मानिन्छ । प्याजका धेरै उपयुक्ततामध्य एक यौ न क्षेत्रमा वृद्धि पनि हो ।आहार विशेषज्ञ तथा यौ’ न रो’ग विशे’षज्ञहरुका अनुसार प्याजको सेवनले यौ ‘निक कमजोरी हटाउन पनि सहयोग गर्छ । सुखी तथा सन्तु’ष्ट वैवाहिक जीवनका लागि सं ‘म्भोग शक्ति प्र’वल हुन आवश्यक हुन्छ र यसका लागि प्याज एक अचूक उपाय बन्न सक्ने बताइएको छ ।
विशेषज्ञहरुका अनुसार यौ न शक्तिको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि प्याज एक सस्तो तथा सुलभ विकल्प हो । प्याजका फाइदा सेता प्याजको रस, अदुवाको रस, शुद्ध मह र घिउ ५–५ ग्राम मिलाएर हरेक बिहान सेवन गरेमा यसले करिब तीन घण्टासम्म यौ न आनन्द दिने विशेषज्ञहरुको भनाई छ ।
यसका केहि यस्ता छन् अन्य फाइदा :प्याज खानाले पेटमा पाचन रसको उत्पादन बढ्दछ । जसका कारण हामीले खाएको खानेकुरा राम्रोसँग पच्दछ र पाचन सम्बन्धी समस्या पनि कम हुन्छ ।प्याजको रसमा मह मिलाएर खानाले ज्व’रो, रुघा’खो’की, तथा घाँटी खसख’स गरेको र एलर्जी जस्ता समस्यामा राहत मिल्दछ ।प्याजमा क्रो’मियम तत्व हुन्छ जसले रगतमा भएकेा चिनीको मात्रा अर्थात् ब्ल’ड सुग’र नियन्त्र’णमा मद्दत गर्दछ ।
काँचो प्याजको सेवनले रगतमा हानिकारक कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्न दिँदैन र यसले मुटुलाई स्वस्थ राख्न सहयोग पुराउँदछ ।दुखेको वा सुन्निएको ठाउँमा प्याजको रस लगाउनाले दुखाइ कम हुन्छ र संक्रमण पनि हुँदैन ।प्याजमा विभिन्न फाइटोकेमिकल्स तथा भिटामिन सी पाइन्छ, जसले मानिसमा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउँदछ ।
तपाइँको जिउमा कतै माहुरीले चिले’को छ ? यदि माहुरीले चिल्यो भने उक्त ठाउँमा प्याजको रस लगाउनुहोस्, दुखाइ तथा सुन्निने क्रम पनि कम हुन्छ ।प्याजको नियमित सेवनले पेटको अल्सर अर्थात् ग्या’स्टि्रक अ’ल्सरको जोखि’म कम हुन्छ। प्याजमा भएको तत्वले सरीरको फि्र रेडि’कल्स हटा’उन मद्दत गर्दछ ।
नाकबाट विभिन्न कारणले रगत बगिरहेको छ भने काँचो प्याज काटेर सुँघ्नाले रगत बग्न बन्द हुन्छ । प्याजमा क्या’न्सर प्रति’रोधी तत्व पाइन्छ । यसमा हुने क्वेर्से’टिन नामक यौ’गिकले क्या’न्सरबाट ब’चाउन सहयोग गर्दछ । यो खबर साभार गरियको हो ।
Prevके तपाँइलाइ थाहा छ फोन उठाउँदा किन भनिन्छ ‘हेलो’ ? यस्तो छ अचम्मको कारण
nextयी नै हुन्, चालक जसले ब्रेकफेल भएको बसलाई उकालोमा हालेर ४० जनाको ज्या’न” जोगाए !